बानेश्वरमा कसरी भएको थियो भिडन्त, हेर्नुहोस् भिडियो
डा. केसीको समर्थनमा निस्किएको प्रर्दशनमा प्रहरी हस्तक्षेप, झडपमा दजनौं घाइते
डा. केसीको पक्षमा राजधानीमा प्रदर्शन, के छन् केसीका ७ बुँदे मागहरु (हेर्नुहोस् भिडियो)
जुम्लामा सरकारले गोली चलाएको झुठो हो : रक्षामन्त्री
गुडिरहेको ट्रकलाई बसले ठक्कर दिँदा २४ यात्रु घाइते
इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन
फेसवुकद्धारा अमेरिकाको एनालाइटिक्स फर्मलाई निलम्बन
सम्बन्धबारे चुप बस्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले मोडललाई पैसा दिएको खुलासा
भारतीय प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्विकृत
मूल्य घटाएको चितवनका किसान आक्रोशित
‘पहिलो प्रेम’मा सुशिल र श्यारोन
30 Jestha 2074 Tuesday 8:37 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं । प्रदर्शन मिति नजिकिदै जाँदा प्रचारप्रसारलाई निकै तीव्रता दिइरहेको ‘सायद टु’ यूनिटले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको ‘पहिलो प्रेम’ बोलको गीतमा सुशिल श्रेष्ठ र स्यारोन श्रेष्ठ फिचरिङ भएका छन् । गीतमा मनाङका मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ ।
सुशन प्रजापतिको छायांकन रहेको गीतमा सुगम पोखरेलको शब्द, संगीत र स्वर रहेको छ । गीतमा विक्रम स्वाँरले कोरियोग्राफी गरेका छन् । दुर्गिस फिल्मसको व्यानरमा निर्मित चलचित्रलाई सुनिल रावलले निर्माण गरेका हुन् । इश्वर श्रेष्ठ र सुवास लामिछानेको पनि यो चलचित्रमा लगानी रहेको छ ।
पुष्पराज न्यौपानेको लेखन तथा निर्देशन रहेको सिनेमामा सुशिल र स्यारोनसँगै अमृत ढुंगाना, सुशिल सिटौला लगायतले अभिनय गरेका छन्् । युवा पूस्ताका विषयलाई चलचित्रमा उतार्दै आएको दुर्गिस फिल्म्सको यो पछिल्लो चलचित्रलाई पनि प्रतिक्षित मानिएको छ । चलचित्र असार ३० गते प्रदर्शन हुँदैछ ।
सन्दिप लामिछानेको पहिलो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडाैं : नेपालीयुवा पुस्ताका चर्चित क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको पहिलो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा ‘उदास मेरो’ बोलको गीतको ...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ७२ औं जन्मोत्सव नेपालगञ्जमा
तिरुपति बालाजीको मन्दिर सबैभन्दा धनी मन्दिर
योगमायालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउन माग
दाङको तुलसीपुरमा बृहत साहित्य उत्सव
नोबेल अस्पताल सञ्चालक एवं समाजसेवी डा.शर्मालाई सम्मान
5 Shrawan 2075 Saturday 3:18 pm
5 Shrawan 2075 Saturday 2:18 pm
डा. केसीको पक्षमा राजधानीमा प्रदर्शन, के छन् केसीका ७ बुँदे ...
5 Shrawan 2075 Saturday 1:04 pm
5 Shrawan 2075 Saturday 12:55 pm
5 Shrawan 2075 Saturday 12:49 pm